Ukususwa kwabathobekileyo, iiprosesa zeSilicon zeApple kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndisuka eMac | ndisuka kuMac
Ukususwa kwabathobekileyo, iiprosesa zeSilicon zeApple kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ingcono ndisuka eMac
UJordi Gimenez | | Izaziso, Amahemuhemu
Sisondela ekupheleni kukaJanuwari kwaye iindaba malunga neemveliso ze-Apple, amahemuhemu kunye nokuvuza akuyeki. Kule meko siza kubona ezinye ze Kule veki iindaba ezivezwe kuMna ndisuka eMac.
Kuthi onke amahemuhemu kunye neendaba malunga nehlabathi le-Apple zibalulekile. Kwezinye iimeko la mahemuhemu aya kuphelela ekubeni yinyani kwaye sikwelo xesha apho siza kuba nenkcazo ye-Apple kungekudala, ewe, inyanga ka-Matshi isondele. Nangona oku kungenzeki siqhubeka nokubona zonke iintlobo Amahemuhemu kunye neendaba malunga nokusayinwa kweCupertino.
Siqala ngoThobeka. Eli lelinye lamaqonga ambalwa akhoyo kwiMac ebonelela ngenkonzo yorhumo lwenyanga ngokutshintshiselana ngayo ukufikelela kwinani elikhulu lemidlalo yevidiyo. Oku kusanda kwazisa ukuba iqonga ukuba kungekudala izakuwisa inkxaso yeMac.
Enye yeendaba ezibalaseleyo kule veki yile ibonakalisa ukuvuthwa kweApple M1. Ezi processors ezibizwa ngokuba yiApple Silicon, zimiselwe ukuba zibe zi yangoku kunye nekamva leMac. Ekupheleni kwalo nyaka isangqa ingavalwa neyakhe ukusasazwa kuzo zonke iiMac ezinotyikityo kwikhathalogu yemveliso. Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni.
Uguqulelo olutsha lwe-firmware lufika kwi Isizukulwana sesi-XNUMX se-AirPods. Olu hlaziyo lufike kule veki kwaye kubonakala ngathi yinguqulelo egxile ekuphuculeni ukhuseleko, inguqulelo I-4C170 yongeza ukulungiswa kwe-bug kwi-headset firmware.
Kuyacaca ukuba uphuculo olongeziweyo kwiMacBook Pro kulo nyaka uphelileyo luyamangalisa, oku kungqinwa luninzi lwabafoti abaqeqeshiweyo abawuxabisa kakhulu umsebenzi owenziwe nguApple ngala maqela. Umfoti oMkhulu weCNET uAndrew Hoyle ubonise iinkcukacha ezithile malunga namava akhe esebenza kunye neSigaba sokuQala ikhamera yefomathi ephakathi encanyathiselwe kwiMacBook Pro eneM1 Max kunye uthi la mava akanakoyiswa ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukususwa kwabathobekileyo, iiprosesa zeSilicon zeApple kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ingcono ndisuka eMac
Indlela yokwabelana nge-Wi-Fi kwi-iPhone
Ezinye zeeVenkile ze-Apple zase-UK zibonakala zibuyela kwesiqhelo